Nduzi maka nchịkọta njem nke North East India | Kpọọ + 91-993.702.7574
Obodo kachasi anya, ala dị omimi nke ugwu ugwu bụ ihe a na-ejighị n'aka ịga ebe obibi. Ọ bụ n'ezie eluigwe na-enweghị ọnụ! Ndị nchịkọta njem anyị North East India na-emepụtara maka ịchọta ala a dị omimi.
E zoro ezo n'ugwu na-enweghị nsọpụrụ na ndagwurugwu nke Himalaya, North East India bụ nke kachasị nke a nyochara, nke ndị ọzọ na ndị ọzọ dị n'etiti India. Nke a nke mba ahụ bụ ebe a maara nke ọma 'Ụmụ nwanyị asaa nke ndị nwanyị' Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland na Tripura. Ọdịdị ọzọ a na-akọwaghị nke ọwụwa anyanwụ nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ bụ Sikkim. Gangtok a magburu onwe ya na-adọta ọtụtụ ndị njem na afọ ọ bụla gburugburu ma bụrụ nleta na-enweghị atụ maka nleta ọ bụla na ndụ gị.
Ejikọtara ya na nke India site na ala dị warara, nke a dịpụrụ adịpụ ma mara mma ebe mara mma nke ugwu ugwu na ebe obibi ndị mọnk Buddha na-ejide ngwa ngwa nke ndị India na ndị ọbịa si mba ọzọ.
N'omenala na mpaghara, North East India dị iche na mba ndị ọzọ ma otu a gosipụtara n'ụzọ ndụ nke mba ahụ. Umu Ugwu Ugwu, ikpo ume iku ume, oke ohia, ogige ndi ohia di iche iche, omenala di iche iche na ime ihe ndi ozo ga-eme ka i cheta ncheta ndi a na-echefu echefu.
Ụfọdụ n'ime ebe ị nwere ike ịhazi njem gị dị Darjeeling, Kalimpong, Gangtok, Lachung, Kanchenjunga Peak, Yumthang Valley, Shillong, Pelling, Cherrapunjee, Kaziranga National Park, Guwahati wdg. Lelee ụfọdụ n'ime nchịkọta njem ndị dị n'Ebe Ugwu East India na-eme atụmatụ maka njem gị!
Arunachal Pradesh agbụrụ
Ugwu ugwu nke North East India